Dulmarka Shirkada / Faahfaahinta - Shaanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd.
Shanxi Ruiwo Phytochem Co., Ltd waa GMP, taxane ISO, shirkad Kosher iyo Halal shahaado haysta, oo loogu tala galay aqoonsiga, horumarinta iyo soosaarida dhirta dhirta iyo waxyaabaha ka dhasha. Iyada oo leh awoodo R&D oo xoog leh iyo tikniyoolajiyad wax soo saar oo horumarsan, Ruiwo waxay sii wadaysaa inay hal-abuurnimo ku sameyso soosaarka dhirta ee u adeegta warshadaha dawooyinka, nafaqada iyo qurxinta
1. Waxaan ka hirgelinnay nidaam gaar ah dalagga beeraha adduunka oo dhan; hubinta tayada daawada tayada ugu sareysa. Marka la eego sii wadida iyo kala duwanaanta dhirta, Ruiwo waxay dhistay saldhiggeena dhir doog si aan u siino alaabta ceyriin oo tayo sare leh taasoo damaanad qaadeysa tayada joogtada ah. GAP waxay ku jirtaa caddeyn.
2. Waxaan ka xoog badanahay R&D. Waxaan soo saareynaa maadooyinka dhirta ugu waxtarka badan iyo gaar ahaanta ee warshadaha dawooyinka, nafaqada iyo qurxinta, oo waxaan isku dareynaa astaamaha geedo kasto cilmi baaristeena gaarka ah si aan u horumarino qaabeynta ugufiican.
3. Waxaan ku sameynay nidaam shaybaarka shaybaarka lagula taliyo tayo sare leh iyo nidaamka wax raadinta. Waxaan haynaa xog sax ah oo ka timaadda khuburo aqoon iyo qalab tijaabo oo heer sare ah taasoo noo saamaxeysa in aan ka koobnaano awoodaha baaritaanka degdega ah oo sax ah si loo hubiyo tayada wax soo saarka ugu weyn ee leh awooda ugu sareysa.
Marka aan nahay Ruiwo, waxaan ku firfircoon nahay soo saarista alaabooyin hal-abuur leh iyada oo lagu saleynayo sii wadida iyo kala duwanaanta dhirta. Waxaan aaminsanahay in maaddooyinka takhasuska gaarka ah iyo tikniyoolajiyadda hal-abuurka ahi ay yihiin aasaaska ugu fiican ee aannu ugu adeegno baahiyaha macmiilkayaga. Waxaan karti iyo sharaf u nahay inaan soo bandhigno xalka ugu weyn ee badeecada si qiimaha loogu daro wax soo saarka.